बडिगाड खोलमा बन्दै गरेको पक्की पुल भत्कियो, ५ जना घाइते – Gulminews
Home/बिकासका कुरा/बडिगाड खोलमा बन्दै गरेको पक्की पुल भत्कियो, ५ जना घाइते
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ बैशाख १, आईतवार १९:१४ मा प्रकाशित
बडिगाड, ०१ बैसाख । गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ७ र वडा नं. ३ को झेंदी भन्ने स्थानमा निर्माणाधिन बडिगाड खोलाको पक्कि पुल भाँचिदा ५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको इमरजेन्सी पोलिक्लिनिक हटियामा उपचार भैरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्: भाँचिएको पुलको अनुसन्धानका लागि विज्ञको टोली आउँदै, यस्ता छन् ईन्जिनियरको अनुमान र नगरप्रमुख सापकोटाको भनाई